गिरावटमा पढ्न मेरा books पुस्तकहरू वर्तमान साहित्य
गिरावटमा पढ्न मेरा books पुस्तकहरू
कारमेन गुइलन | | किताबहरु, साहित्य
शरद केही दिन पहिले सुरु भयो र मसँग पहिले नै मेरो सूची छ Books पुस्तकहरू पढ्नका लागि यस स्टेशन मा म अझ बढी पढ्न सक्षम हुन चाहन्छु तर समय अहिले छैन कि म अहिले सकिएको छु र अहिलेको लागि समाप्त गर्नुका साथै मैले for ओटा समाधान गर्नुपर्नेछ जुन मैले अहिले पाएको छु र मैले तपाईंसँग खेलेको हो। मेरो अघिल्लो लेख। मानिसहरुले टिप्पणी गरे, तिनीहरूले यो सही भयो! हो, यो पुस्तक थियो Clarissa पिन्कोला Estés, «ब्वाँसोहरूसँग दौडिने महिलाहरू»। मलाई यो वास्तवमै मनपर्दछ र यो कहिलेकाँही स्पष्ट पार्दैछ।
यस पुस्तकको मसँग करिब १०० पृष्ठहरू हुनेछन, र मसँग पहिले नै दिमागमा छ कि कुन अर्को अर्को हुनेछ र कुन व्यक्तिले यसलाई अनुसरण गर्नेछ। यदि तपाईं जान्न चाहनुहुन्छ कि तिनीहरू के हुन् गिरावट मा पढ्न मेरो3पुस्तकहरु, पढिरहनुहोस्।
1 "उही कम्पास" डेभिड ओलिवास द्वारा
2 बेनेडिक्ट वेल्स (१ 1984) XNUMX) द्वारा "एकताको अन्त"
3 "संसारको केन्द्रबाट मायाको चिल्ला" Kyoichi Katayama द्वारा
"उही कम्पास" डेभिड ओलिवास द्वारा
मलाई थाहा छैन कि शीर्षक र लेखक तपाईंलाई परिचित छन् कि छैन, तर तुलनात्मक रूपमा हालसालै सम्म म यस युवा लेखकलाई अनजान थिए। यो ट्विटरको लागि धन्यवाद थियो कि मैले उसको प्रोफाइल देखेको थिएँ र म यो पढ्न सक्दछु कि यो उनको दोस्रो पुस्तक हो र उसले पहिले नै एउटा अघिल्लो प्रकाशित गरेको हो "Serendipity"। मैले पुस्तकबाहेक उनको केही पढेको छैन "उही कम्पास" मलाई बोलाउँदै छ ...
पक्कै पनि मैले यो एक ebook संस्करणमा किनेको हो, किनभने मेरो लागि ठाउँ जति नै समयको अभाव छ र यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने म यो समीक्षा गर्न सक्दछु जब म यसलाई समाप्त गर्छु।
यो एडोल्फो र एडुआर्डोको कथा हो, दुई जुम्ल्याहा भाइहरू, जो उनीहरूको समानताका बावजुद पनि पूर्ण भिन्न छन्। भावनाहरू डर र साहसको बीचमा उनीहरूको तरिकाले काम गर्न सिकाउँदछ यदि हामी वास्तवमै प्रेम गर्न तयार छौं भने पनि यदि हामीले आशा गरेनौं भने।
डेभिड ओलिवास हामीलाई एक यात्रामा आमन्त्रित गर्छन् जसको माध्यमबाट हामी हाम्रो जवानीको एक भाग, भावनात्मक शंका, प्रेम र साहस, सबै एकै भाग्यको साथ जान्छौं: हाम्रा आफ्नै प्रश्नहरू समाधान गर्न।
बेनेडिक्ट वेल्स (१ 1984) XNUMX) द्वारा "एकताको अन्त"
यस जर्मन लेखकले जित्यो २०१ 2016 मा यूरोपीयन साहित्य पुरस्कार यो उपन्यास संग। यो सम्पादकीय माल्पासो द्वारा सम्पादन गरिएको हो र यसको मूल्य २eयूरो छ।
उसको सारांशले विशेष गरी मेरो ध्यान खिच्छ। तिम्रो के बिचार छ? जानकारी को एक अतिरिक्त टुक्रा को रूप मा, यो दिन सम्म प्रकाशित हुने छैन अक्टोबरको लागि 27। हामीले कुर्नुपर्नेछ!
उसको बुबाआमा दुर्घटनामा मरे पछि जुल्स एउटा बच्चा भइसकेका छन र आफ्नो रातमा कपाल र रातको चश्मा सहित अल्भा उसको छेउमा बस्दैनन्। अल्भा उसको एकमात्र महान् प्रेम हुनेछ, यद्यपि दुवैले उनलाई भन्न साहस पाउन सकेन। तिनीहरूको गन्तव्यहरू, कठिन बाल्यावस्थाद्वारा चिह्नित "जसले अदृश्य दुश्मनलाई असर गर्दछ जब कम से कम आशा गरिन्छ", जुलेसका भाइहरूसँग मिल्दछ।
एक महान प्रेम कथा जुन यसको नायकहरूले महसुस गरेको प्रेम भन्दा पर जान्छ। यो लेखन, कला, संगीत, र अन्ततः जीवनको प्रेम हो। जर्मन साहित्यिक दृश्य को युवा स्टार बाट एक उपन्यास।
"संसारको केन्द्रबाट मायाको चिल्ला" Kyoichi Katayama द्वारा
को हातबाट अल्फागुआरा यो उपन्यास पुन: प्रकाशित गरियो, जुन उनीहरूको अनुसार सबै समयका सबैभन्दा व्यापक रूपमा पढिएको जापानी उपन्यास हो। यो २०० 2008 मा पहिलो पटक स्पेनमा प्रकाशित भयो र त्यस पछि यो महानलाई पार गर्यो हारुकी मुरकामी बिक्री मा।
म, शायद मुरकमीको लेखनको लागि मेरो ठूलो प्रशंसा को कारण, अहिले सम्म यो लेखक पढ्न प्रतिरोध गरेको छु! म यसलाई अब लिन सक्दिन र म यो कथा पढ्न चाहान्दिन कि यति धेरै समीक्षाहरू छन् तर दुई जापानी लेखक बीचमा समानता र भिन्नताहरू पनि अवलोकन गर्न।
सकुटारि र अकी जापानको प्रान्तीय शहरको स्कूलमा भेला हुन्छन्। उहाँ एक विचित्र र व्यंग्यात्मक किशोर हुनुहुन्छ। उनी स्मार्ट, सुन्दर र लोकप्रिय छन। तिनीहरू चाँडै अविभाज्य मित्र बन्न सक्छन्, एक दिन सम्म, सकुत्रेले अकीलाई बिभिन्न आँखाले देख्दछन्, र गम्भीर मित्रता रमणीय जोशमा परिणत हुन्छ। दुबैले इन्द्रियलाई भंग गर्ने र जीवन र मृत्युको सिमाना मिटाउन सक्षम कथा प्रस्तुत गर्छन्।
र तपाईं, तपाईंसँग पठनहरूसँग सूची छ जुन तपाईंलाई यो गिरावटसँगै आउँछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » गिरावटमा पढ्न मेरा books पुस्तकहरू
अक्टुबर यस महिनामा लेखकहरू जन्मे। उनका केही वाक्यांशहरू
ब्रदर्स ग्रिम र हंस क्रिश्चियन एन्डरसनले छोटो कथाको अनमोल संस्करणहरू